रुसले आगामी अक्टोबरबाट को’रोना बिरू’द्धको भ्याक्सीन दिने, अमेरिकी रो’ग विशेषज्ञद्वारा चिन्ता…हेर्नुहोस् । – Nepal Online Khabar
रुसले आगामी अक्टोबरबाट को’रोना बिरू’द्धको भ्याक्सीन दिने, अमेरिकी रो’ग विशेषज्ञद्वारा चिन्ता…हेर्नुहोस् ।
एजेन्सी : रुसले आगामी अक्टोबरमा को’रोना भा’इरसको भ्या’क्सीन बितरण गरिने बताएको छ । उसले आफ्ना नागरिकहरुलाई विस्तृत खो’प अभियान संचालन गरेर भ्या’क्सीन दिइने जनाएको छ । यसअघि को’रोना भाइ’रसको भ्या’क्सीन बिकासमा सफलता प्राप्त भइरहेको प्रतिकृया दिएको रुसले आफ्ना नागरिकहरुलाई यही अक्टो’बारमा बितरण गर्ने भएको हो ।
रुस सरकारका स्वास्थ्यमन्त्री मि’खाइल मुराश्कोले आगामी अक्टोबरमै रुसी नागरिलाई भ्या’क्सीन दिने योजना बनाइरहेको जा’नकारी दिनुभएको छ । रुसले यतिबेला तीब्र रुपमा भ्याक्सीन बिकासको काम गरिहेको छ । अघिल्लो महिना रुसी बैज्ञनिकहरुले कोरोना भ्या’क्सिनको सुरुवाती ट्रायल पूरा गरिसकेको जानएका थिए । र त्यसको नतिजा स’कारात्मक भएको दा’वी गरेका थिए ।
अब अक्टाेबरमा दिइने भ्या’क्सीन सबैभन्दा पहिले डाक्टर र शिक्षकलाई कोरोना दिइने स्वास्थ्यमन्त्री मि’खाइल मुराश्कोले रुसी मिडियालाई बताएको बीबीसी हिन्लेदीमा उल्लेख छ । को’रोना भा’इरस बि’रुद्ध भ्या’क्सीन चलाउन सम्भवत यो महिनामै नियामक निकायले स्वी’कृति दिनेछ ।
अमेरिकामका संक्रा’मक रो’ग विशेषज्ञ डा’क्टर एन्थोनी फाउचीले भने रुसको यो कदम’प्रति चि’न्ता व्यक्त गरेका छन् । उनले रुस र चीनले आफ्ना नागरिकलाई को’रोना भ्या’क्सिन दिनु अघि सम्बन्धित सबै परी’क्षण त’थ्य रुपमा नै गरिरहेको या बास्ताबिकता भन्दा टाढा रहेको हो की ? भन्नेमा चि’न्ता व्यक्त गरेका हुन । उनले अमेरिकाले पनि कोरोनाको प्रभा’वकारी भ्या’क्सीन निर्माण गरिरहेको बताए ।
डा’क्टर एन्थोनी फाउचीले यो बर्षको अन्तिमसम्मा अमेरिकाले को’रोनाबिरु’द्धको भ्याक्सीन ल्याउने दावी गरे । उनले भने -‘यो वर्षको अन्त्यसम्म अमेरिकाले सुरक्षित र प्रभा’वकारी कोरोना भ्या’क्सिन ल्याउनेछ । त्यसपछि अमेरिकाले आधुनिक भ्या’क्सिनका लागि कुनै अन्य देशमा नि’र्भर हुनु पर्दैन।’
को’रोना भा_इरसले विश्वलाई भ’यावह स्थिती सृ’जना गरेका बेला अमेरिकिा, रुस र चीनसहितका अन्य थुप्रै मुलुकका बैज्ञानिकहरुले यसबि’रुद्धको भ्या’क्सीन नि’र्माण गरिरहेका छन् । अहिलेसम्म विश्वभर भण्डै २० भ्या’क्सिनको क्लि’निकल ट्रायल गरिएको छ । तर कुनैपनि मुलुकले पू’र्ण रुपमा को’रोना भा’इरस संक्र’मण रोक्न सकिने औ’षधि निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् ।
यहीबीच रुसी स्वास्थ्यमन्त्रीले भने मस्कोमा रहेको गामालेया इन्स्टि¥च्यूटले को’रोना भ्या’क्सिनको क्लि’निकल ट्रा’यलको सम्पूर्ण काम सक्नेक्रममा रहेका जनाएको छ । यसलाई सरकार मार्फत बैधानिकता दिन रजि’स्टर गर्नकाे लागि कागजी प्र’कृयामा रहेको जान’कारी दिएको छ । News24 Nepal
Prevभाग्य न्यौपाने पुगे छोरालाई आफ्नै लुगाले बाधेर तातो घाममा रिक्सा चलाउने बाबुकोमा। सहयोग गर्दै,,,भिडियो हेर्न फोटोमा क्लिक गर्नुहोला।
Nextनेपालको नयाँ नक्सा अन्तराष्ट्रिय समुदायमा पठाउने सरकारको तयारी…हेर्नुहोस् । सक्दो सेयर गरौ !
अब ओलीसँग सहमति गरेर अघि बढ्नुको विकल्प छैन – प्रचण्ड …हेर्नुहोस।
श्रीमान सँगको डिभोर्ष पछि बनिन करोड़पति, हेर्नुहोस ।(भिडियो सहित)